नयाँ पुस्ता तयार नहुँदा नवदुर्गाको मुकुण्डो बनाउने पेशा संकटमा | enews off
Home भक्तपुर नयाँ पुस्ता तयार नहुँदा नवदुर्गाको मुकुण्डो बनाउने पेशा संकटमा
नयाँ पुस्ता तयार नहुँदा नवदुर्गाको मुकुण्डो बनाउने पेशा संकटमा
भक्तपुरको ऐतिहासिक एवम् साँस्कृतिक महत्वको नवदुर्गा देवगणको मकुण्डो बनाउने पेशा संकटमा परेको छ । आर्थिक अभावसँगै मुकुण्डो बनाउन नयाँ पुस्ता तयार नहुँदा यो पेशा संकटमा परेको हो ।
नवदुर्गा गण नाचको लागि आवश्यक विभिन्न देवी देवताहरुको १३ वटा मुकुण्डो बनाउने कार्यमा अहिले पूर्ण चित्रकार एक जनामात्र संलग्न हुनुहुन्छ । उहाँको परिवारका सदस्य समेत यो पेशाबाट विमुख हुँदै गएका छन । पुर्ण चित्रकारपछि यो पेशा कसले सम्हाल्ने, यसको जवाफ कसैसँग छैन ।
प्रत्येक वर्ष नयाँ बनाउनु पर्ने मुकुण्डो तयार नभए नवदुर्गा नाच समेत बन्द हुन्छ । भक्तपुरको सबैभन्दा महत्वपुर्ण नाचको रुपमा रहेको नवदुर्गा नाचको मुकुण्डो बनाउन नयाँ कालिगढ तयार गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
नवदुर्गा देवगणको १३ वटा मुकुण्डो तीन महिनामा तयार गर्नुपर्दछ । घण्टाकर्ण चतुर्दशीका दिन मुकुण्डो बनाउने कार्यको शुभारम्भ हुन्छ । मुकुण्डो बडादशैंको महानवमीको दिन प्रदर्शन गर्न तयारी अवस्थामा राख्नुपर्दछ । तर यो वर्ष देवगाणहरुको नंकी विवादले दुई हप्ता पछि मात्र मुकुण्डो बनाउने कार्य थालेको हो ।
मुकुण्डो बनाउन कालोमाटो, विभिन्न किसिमका ढुङगाबाट बनेको रङग, सुन, मैदा, मटितेल, कपास, नेपाली कागज, जुटको बोरा, कोरा कपडालगायतका सामाग्री आवश्यक पर्दछ । हेर्दा सजिलो लाग्ने तर अत्यन्त कठिन कार्य भएकाले कामदार समेत पाउन मुस्किल रहेको चित्रकार बताउनुहुन्छ ।
मुकुण्डो बनाउन पहिला माटोलाई धुलो बनाएर चाल्ने, त्यसपछि मैदाको माड बनाई धुलो माटो हाल्दै मुछ्ने र डल्ला डल्ला बनाई राखिन्छ । सो डल्लो सुकेपछि कपास र नेपाली कागज राखी फुटाउनु पर्छ । अनिमात्र मकुण्डो बनाउने कार्य शुरु हुने चित्रकारले बताउनुभयो । “मुकुण्डो बनाइसकेपछि घाममा सुकाउनु हुँदैन हावाले मात्र सुकाउनु पर्छ । एउटा मुकुण्डो सुकाउन कम्तिमा दुई हप्ता लाग्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
मुकुन्डो मात्र बनाएर पुग्दैन घण्टाकर्णका दिन नवदुर्गाको मुकुन्डो बनाउनलाई माटोको पुजा गर्नुपर्दछ । यसरी माटोलाई पुजा गर्न आउने बाजागाजा सहितको टोलीलाई भोज खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । नवदुर्गा नाचलाई जीवन्तता दिई परम्परा लोप हुनबाट बचाउने हो भने सम्बन्धित निकायले वर्षेनी मुकुन्डो बनाउनका लागि उचित आयस्ताको बन्दोबस्त गर्न चित्रकारले माग गर्नुभएको छ । मुकुण्डो बनाउन आवश्यक रकमको जोहो भए मात्र नयाँ पुस्ता तयार हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मुकुण्डो बनाउन कामदारको ज्याला, आवश्यक सामाग्री खरिद र आफ्नो ज्याला समेत जोड्दा वर्षेनी तीन लाख खर्च हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । मुकुण्डो बनाउन दुईवर्ष अघि देखी नियमित रुपमा गुठी संस्थानले ४० हजार, भक्तपुर नगरपालिकाबाट एक लाख १६ हजार र बनेपा नगरपालिका बाट १२ हजार दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “अन्य स्रोत केही छैन । सहयोग दातासँग सहयोग मागे मात्र हो । उहाँले भन्नुभयो, आम्दानी भन्दा बढी खर्च हुने भएकाले घरपरिवारले समेत मुकुण्डो नबनाउन दवाब दिने गरेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी । ”
उहाँले रकम नपुग भएको विषयमा गुठी संस्थानमा पटक पटक गुनासो लिएर गएपनि हुन्छ हुन्छ भन्ने तर सहयोग भने नगर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, गुठीका हाकिम वर्षदिन नपुग्दै सरुवा हुन्छ र अर्को आउँछ । कति ताकेता गर्नु ? आश्वासन बाहेक केही पाइएन ।”
गुठी संस्थान भक्तपुरका आन्नद कर्माचार्यले मुकुण्डोको बनाउन वर्षेनी ४० हजार दिँदै आएको जानकारी दिनुभयो । रकम अपुग भएको स्विर्कार गर्दै गर्नुभयो प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “गुठीबाट दिइरहको रकम अलि अपुग होला तर उहाँले मागेको रकम गुठीबाट उपलब्ध गराउनु अलि सम्भव छैन । यो नै पहिला भन बढाएको दिएको हो । उहाँको मागलाई केन्द्रमा पठाएको छु गुठीले बेवास्ता गरेको छैन । उहाँको माग पुरै पुरा नहोला तर केही सम्बोधन भएर आउन सक्छ ।”
वि.सं. २०२० सालदेखी नवदुर्गा देवगणको मुकुण्डो बनाउँदै आउनुभएका चित्रकार अहिले ७५ औं बसन्त पार गर्ने तरखरमा छन । उहाँले धर्म संस्कृतिको जगेर्नाको लागि मात्र मुकुण्डो बनाउन नछोडेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उमेरले समेत साथ छोड्दै ल्याएकाले आफु पछि कसले मुकुण्डो बनाउँछ भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको बताउनुभयो । सम्बन्धीत निकायले चासो दिएर आवश्यक रकमको बन्दोबस्त गरिदिए मुकुण्डो बनाउन नयाँ पुस्ता आकर्षित हुने, नभए आफुसँगै मुकुण्डो बनाउने कार्य लोप हुने भयले सताउन थालेको उहाँले बताउनुभयो । नवदुर्गाको मुकुण्डो मैले नबनाए जिम्मेवारी बोक्ने को ? यो पेशालाई निरन्तरता दिने कसले ? उहाँको प्रश्न रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अरुको त के कुरा गर्ने मेरो छोराहरुले नै यस कार्यलाई निरन्तरता नदिने भन्छन् । यसको निरन्तरताको लागि सम्बन्धित निकायहरुले आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने भए यो कार्यलाई निरन्तरता दिने नत्र सकिन्न ।
Previous articleनेवार समुदायमा शिवको प्रतिक प्यँचाःको आशन राखी जमरा हाल्ने परम्परा
Next articleयसवर्षको बडादशैं शुरु, आज घरघरमा घटस्थापन गरी जमरा राखिँदैं